हिँसा नियन्त्रण गर्न अचम्मको जुक्ति ; जनताका हतियार किन्दै प्रहरी ! – Everest Dainik – News from Nepal
हिँसा नियन्त्रण गर्न अचम्मको जुक्ति ; जनताका हतियार किन्दै प्रहरी !
वासिङटन, पुस ११ । हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दै गएपछि संयुक्तराज्य अमेरिकाको बाल्टिमोर प्रहरीले अचम्मको जुक्ति निकालेको छ । प्रहरीले आमजनतासँग रहेका रकेट लन्चर समेतका झण्डै दुई हजार थान हातहतियार खरिद गरेको हो ।
गत साता सञ्चालित तीन दिने अभियानका क्रममा गैरकानुनी समेतका हातहतियार खरिद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस सहरमा लगातार चार वर्षदेखि बर्सेनि ३०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको एकअर्का विरुद्ध आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
एकजना प्रहरी प्रवक्ताले प्रहरी अधिकृतहरुले एक हजार ८६० वटा हातहतियार सङ्कलन गरेको जानकारी दिए । नगरका मेयरले ट्वीट गरी एउटा रकेट लन्चर समेत बरामद भएको जनाएका छन् ।
अधिकारीहरूले ठूलो म्यागजिन लाग्ने हतियारको २५ डलर, ह्यान्डगन र राइफलको १०० डलर, अर्ध स्वचालित राइफलको २०० डलर र स्वचालित राइफलको ५०० डलर दिने घोषणा गरेका थिए ।
बाल्टिमोर नगर परिषदका अनुसार यो अभियानका लागि दुई लाख ५० हजार डलर बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । तर स्थानीय “बाल्टिमोर सन” अखबारले उक्त कार्यक्रम समय, रकम र स्रोतको बर्बादी भनी टिप्पणी गरेको छ ।
प्रहरी प्रमुख गेरी गटलले नगर निवासीसँग बन्दुक नै नभएको अवस्थामा बन्दुकको प्रयोगबाट हुने हत्या र हिंसात्मक घटनाहरुमा स्वतः कमी आउने बताए ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार, संयुक्तराज्य अमेरिकामा सन् २०१७ मा हातहतियारको प्रयोगबाट झण्डै ४० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधनले मानिसलाई हतियार राख्न पाउने अधिकार दिएको छ, र अमेरिकी एक तिहाई घरपरिवारमा हातहतियार रहेको छ ।
पछिल्लो पल्ट विद्यालयलाई समेत बन्दूकधारीहरूले सजिलै निसाना बनाउन थालेपछि बन्दूक राख्न पाउने या नपाउने भन्ने बहस फेरी सुरु भएको छ । अमेरिकामा बन्दुक अधिकार पक्षधर राष्ट्रिय राइफल संघले हतियार राख्न पाउनु जनताको संविधान प्रदत्त अधिकार भएकाले यस माथि कुनै पनि प्रकारको रोक लाग्न नहुने जिकिर गर्दै आएको छ ।
स्वयम् राष्ट्रपति ट्रम्प हतियार राख्न पाउनुपर्ने विचारका समर्थक हुन् । एजेन्सी
ट्याग्स: Gun debate, USA